ओलीले आधा भरिएको गिलास पनि रित्याउन खोजेः डा. बाबुराम भट्टराई - निष्पक्षखबर
काठमाडौंः जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आधा भरिएको गिलास पनि रित्याउन खोजेको आरोप लगाए ।
अहिलेको संविधान आधा भरिएको र आधा खाली अवस्थामा रहेको भन्दै नेता भट्टराईले खाली गिलास भर्नुपर्नेमा झन् निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आधा भरिएको गिलास पनि रित्याउन खोजेको बताए ।
आफ्नो पार्टीभित्रको विवादका कारण देशमा संकट आइलागेको उनले बताए । वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने बेलामा जनता समाजवादी पार्टी विभाजित हुँदा अरु पार्टीमा पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो ।
‘हामी एक ढिक्का भएको भए हामी जनता समाजवादी पार्टी आफैंले निकास दिन सक्थ्यौं,’ उनले भने, ‘हामी आपसमा झगडा गर्न थाल्यौं ।’
नागरिकतासम्बन्धी माग पूरा गरेकोमा ओलीलाई ठाकुरले दिए धन्यवाद, देउवालाई विश्वासको मत दिने
ओली उपस्थित नहुनु लोकतान्त्रिक संस्कार कि अलोकतान्त्रिकः प्रचण्ड